Akụrụngwa njikwa akụ | Ngwá Ọrụ Njikwa Akụrụngwa IT | Motadata
Ngwa Nlekọta Ahịa
Etukwala egwu nke
Ngwọta ITAM iji soro na jikwaa akụrụngwa akụrụngwa na akụrụngwa gị niile site na nlele otu jikọtara ọnụ, n'oge ndụ ha niile.
Jiri ihe ịga nke ọma azụmaahịa were
Platform Njikwa Akụrụngwa IT
30% Mbelata na mmefu
Otu isi iyi nke eziokwu maka akụrụngwa IT na-ebelata mmefu na-adịghị mkpa.
20% Mmụba na arụmọrụ
Jikwaa usoro ndụ akụ site na iji ọgụgụ isi site na ịzụ ahịa ruo na mkpofu.
15% Mbelata na mmebi iwu nrube isi
Nweta echiche ziri ezi maka iji ngwanrọ wee lelee maka imebiga ihe ókè.
Njikwa Akụrụngwa IT maka nloghachi ka mma Ihe onwunwe
Ngwọta ITAM kwadoro ITIL nke na-eweta nghọta na ijikwa IT yana ngwa ahịa na-abụghị nke IT iji zere imefu ihe na-emebi emebi, kwalite ịzụrụ ihe bara uru, jikwaa okirikiri ndụ akụ, wee zute ihe niile achọrọ.
Sochie ma chekwaa ozi ziri ezi nke akụ IT na ndị na-abụghị IT gị wee jiri anya nke uche hụ ha na dashboard nwere ngwa bara uru bara uru.
Chọta ma soro akụrụngwa IT gị niile na-akpaghị aka
Jikwaa ma jiri anya nke uche hụ ndabere nke akụrụngwa
Jikwaa akụkụ niile nke HAM na SAM gụnyere ikikere na nkwekọrịta
Mepụta akụkọ iji soro ozi ojiji akụrụngwa
Idokwa ndekọ akpaaka
Mara ihe bụ CMDB
Na ITIL modul
Tinye aka na njikwa usoro ndụ akụ zuru oke site na iji usoro ITIL site na ịzụrụ ruo mgbe ezumike nka.
Weghara ihe omume ma jikọta ha na akụrụngwa maka nyocha miri emi.
Mee mgbanwe na akụ na-adịchaghị mgbagwoju anya site na njikwa mgbanwe
Jiri njikwa nsogbu dozie akụrụngwa IT gị nsogbu
Mepụta ma dokwaa ndekọ ego nke akụrụngwa ọ bụla
Nchọpụta Nsogbu Dị Ọsọ
Jikwaa ahụike ngwa ahịa
Mara Uru nke Njikwa Akụrụngwa
Nọgide na-enwe ezi foto nke ngwa ngwa akụrụngwa gị wee mee mkpebi ịzụrụ data sitere na iji chekwaa ọnụ ahịa.
Mepụta POs bara uru megide ihe merenụ/arịrịọ
Debe ndepụta nke ndị na-ere ahịa masịrị
Soro nkọwa ego dị ka mbelata ọnụ ahịa akụ
Jikwaa nkọwa nkwekọrịta yana mmakwasa na njedebe
Usoro ịzụrụ ngwa ngwa
Nhụta ọnụ ahịa
Kwalite aza ajụjụ
Mara 8 kacha mma nke njikwa akụrụngwa akụrụngwa
Jikwaa mmefu ma zere ntaramahụhụ site n'ịnọgide na-eche nche na nkwekọrịta agwụla yana machibido ngwanro na-akwadoghị ka eme ya.
Sochie ojiji nke ikike ngwanrọ gị niile
Tọọ ọkwa na mgbanwe akụrụngwa dịka usoro ntọala siri dị
Mepụta akụkọ ojiji nke akụrụngwa gị
Machibidoro ụfọdụ ngwanrọ na akụrụngwa gị
Jikwaa Nchekwa Akụrụngwa
Mara usoro 5 nke njikwa akụrụngwa IT
Njikwa Ndepụta Akụrụngwa
Jikwaa izi ezi nke ngwa akụrụngwa gị site na ibelata ntinye aka site na imelite mmelite dabere na mmemme.
Mepụta usoro na-arụ ọrụ n'ụzọ dị mfe site na iji ihe na-ewu ihe
Mepụta usoro ọrụ iji melite ngwa ahịa akụrụngwa dabere na mmemme
Tọọ ọtụtụ omume dabere na mmemme
Mepụta usoro nrụ ọrụ ọtụtụ ọkwa maka akpaaka dị elu
Njehie mmadụ pere mpe
Iji akụrụngwa ka mma
Mara ka ị ga-esi nwetakwuo ihe na njikwa akụrụngwa IT gị
Nhọrọ gị nke
Echefula Track nke IT gị na akụrụngwa na-abụghị IT na nchọpụta akpaaka.
Ntọala akụrụngwa akpaaka na-ebute amụma
Desktọpụ dịpụrụ adịpụ ọtụtụ arụrụ arụrụ
Iwepu ngwa ngwa amachibidoro akpaghị aka
Nkwagharị akụ na nkwado Gate-pass
Onye njikwa akụ atụmatụ
Motadata's Asset Manager bụ ngwa ITAM nke na-enye ọhụhụ zuru oke n'ime akụrụngwa IT na nke na-abụghị IT gị site na ịzụrụ, mmezi na mkpofu.
Onye nnọchi anya & Nchọpụta na-enweghị onye nnọchi anya
Chọpụta akụ IT na akpaghị aka na netwọkụ gị
Ọchụchọ dị elu maka akụrụngwa
Mee ajụjụ mgbagwoju anya site na iji mkpụrụokwu na nhọrọ ọchụchọ
Ngwaahịa na onye na-ere ahịa katalọgụ
Jikwaa nchekwa data nke ngwaahịa nwere nkọwa ọnụahịa na onye na-ere ahịa
Koodu Barcode & Nhazi koodu QR
Mepụta koodu nzuzo na koodu QR maka akụrụngwa anụ ahụ gị
Njikwa Ngwa & Ntụgharị
Akpaaka iji hazie ngwanrọ wee nweta ozi ojiji
Teepu na Desktọpụ
Jikọọ na kọmputa ndị dịpụrụ adịpụ site na intranet na ịntanetị
Njikọ Enweghị Ndozi ya na ọkacha mmasị gị
inyocha Onye njikwa akụ
Ngwọta ITAM jikọtara ITIL nke na-enyere ndị otu aka imezi usoro ndụ ngwụcha ruo ọgwụgwụ nke ma IT na akụrụngwa na-abụghị IT n'ofe nzukọ a.
Ewuru Maka ụlọ ọrụ Dijitalụ
Ikpokoro AI na-enyere ndị otu IT ike ịme mgbanwe ngwa ngwa n'ofe ndị mmadụ, usoro na teknụzụ iji kwalite nnyefe ọrụ.
Hụ ka ụlọ ọrụ dị ka nke gị si eji njikwa akụrụngwa IT nweta nghọta nwere ike ime
Gịnị bụ CMDB?
CMDB (nhazi nchekwa data nhazi) bụ ebe nchekwa na-arụ ọrụ dị ka ebe nchekwa data, na-ejide ozi gbasara gburugburu IT gị gụnyere ihe ndị achọrọ iji nye ọrụ IT. CMDB na-echekwa ndepụta akụ ma ọ bụ ihe nhazi yana mmekọrịta dị n'etiti ha. Site n'ịkwado gị ijikwa data nke ọtụtụ akụrụngwa IT site na otu ebe, usoro nhazi nhazi yana CMDB dị n'etiti ọrụ IT.
CMDBs nwere ike inyere nzukọ gị aka iwetu TCO nke akụ, belata oge akụrụngwa, belata ọnụ ahịa arụmọrụ yana mmezi akụrụngwa site na ọrụ akpaaka, nye ndekọ ziri ezi nke koodu ọrụ yana ịgba ụgwọ maka ndị otu, na-agbaso ụkpụrụ nnabata iwu, ma mebie nyocha ihe kpatara ya. chọpụta nsogbu CI ma dozie ha.
Gịnị kpatara ngwanrọ njikwa akụrụngwa ji dị mkpa?
Akụrụngwa njikwa akụrụngwa IT dị oke mkpa maka uto ụlọ ọrụ n'ụzọ dị iche iche n'ihi na ọ nwere ike inye aka ịchọpụta na igbochi ọtụtụ nsogbu akụrụngwa IT nwere ike.
Isochi usoro ndụ akụrụngwa na ịchọpụta ụzọ echekwara iji kwalite ma ọ bụ dochie ha site na ngwanrọ njikwa akụrụngwa nwere ike ịkwalite nrụpụta ma na-egbochi ndabi nchekwa na izu ohi akụrụngwa. Ijikwa akụrụngwa emelitere nwere ike inye aka chekwaa ego ejikọtara na mmezi akụrụngwa. Akụrụngwa njikwa akụrụngwa IT na-enyekwa aka n'ịgbaso ụkpụrụ ụlọ ọrụ na ịhụ nrubeisi. Ọzọkwa, ọ nwere ike ịkọ maka mkpofu akụrụngwa nke ọma, na-ahụ na emebighị ozi gị dị oke mkpa.
Kedu ihe kpatara njikwa ikike ngwanrọ ji dị mkpa? / Gịnị bụ uru nke njikwa ikikere ngwanro?
Njikwa ikike ikike Software (SLM) kwesịrị ịbụ akụkụ dị oke egwu nke ITAM ma ọ bụ atụmatụ ITSM gị n'ihi ọtụtụ uru ya. SLM na-ebelata ego na ihe isi ike nke inweta na ibuga akwụkwọ ikike ngwa ngwa mgbe achọpụtara mperi site na idobe ọnụọgụ ikikere akwụ ụgwọ maka dakọtara na ọnụ ọgụgụ nzukọ gị chọrọ.
Ụdị sọftụwia ochie nwere njirimara nchekwa oge ochie na-eje ozi dị ka ebe ntinye dabara adaba maka ransomware na nje ndị ọzọ. Ọzọkwa, idowe ụdị sọftụwia ochie ka ọ na-arụ ọrụ yana nchekwa nwere ike ịtụ ụtụ akụrụngwa IT ndị gbatịpụrụ adịchaghị mkpa. SLM dị irè nwere ike melite cybersecurity site na ịchọpụta, ibelata, na ibelata adịghị ike na ihe egwu. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na azụmaahịa gị na-enyocha nyocha oge niile, SLM nwere ike inye aka imeri ihe ịma aka dị ka mmefu mmefu ego karịrị ego, nra, wdg site n'ịhụ na nnabata ikike.
Kedu ihe bụ ihe nchọta dabere vs. nchọpụta akụrụngwa na-enweghị onye nnọchite anya?
Isi ihe dị iche n'etiti ụzọ nchọpụta akụ abụọ a bụ na usoro nchọta ihe gbasara akụrụngwa ga-enwerịrị ndị ọrụ etinyere n'igwe nke ọ bụla, mana usoro nchọta na-enweghị onye chọrọ nrụnye.
Site na nchọta akụrụngwa sitere n'aka onye nnọchite anya, ị nwere ike nyochaa ọtụtụ metrik sara mbara wee nweta nghọta miri emi na ngwa ahịa akụrụngwa IT yana arụmọrụ ebe ị nwere ike soro metrics dị ntakịrị na-eji nchọpụta enweghị ọrụ, na-ebute obere nghọta miri emi na ngwa ahịa na arụmọrụ.
Ụzọ nchọpụta nke dabere na onye ọrụ nwere obere netwọkụ n'elu ebe ọ bụ na ọ naghị adabere na netwọk ahụ, mana usoro na-enweghị ọrụ na-eri ọtụtụ bandwit ma na-achọ ohere netwọk mgbe niile.
Nchọpụta akụrụngwa dabere na onye nnọchite chọrọ nchichi, nleba anya na nchọpụta nsogbu nke ndị nnọchite na sistemu ebumnuche, ebe nchoputa akụrụngwa na-enweghị onye na-achọghị mmezi na sistemụ ebumnuche.